Gurukota reMabasa muSouth Africa Rinoshanyira Mapurazi Akamboitika Bongozozo
Ndira 26, 2010
kwakanaka Gurukota rinoona nezvekushanda kwakanaka kwevanhu muSouth Africa, Va Membathisi Mdladlana, vachishanyira neChipiri mapurazi akatenderedza De Doorns ku Boland uko kwakaitika mhirizhonga gore rapera, zvizvarwa zve Zimbabwe zvikarohwa nezvizvarwa zvemu South Africa.
Vataura vakamirira gurukota iri, VaTebaho Thejane, vaudza Studio7 kuti vari kusangana nevashandi, vana muzvinapurazi pamwe nevamwe vanhu vachikurukura nyaya dzekushanda pamwe nekugara kwakanaka kwevanhu.
Va Mdladana vanoti vachadaidza gurukota remu Zimbabwe rinoona nezve mabasa, Amai Paurina Mpariwa Gwanyanya kuti vakurukure pamusoro penyaya dzevashandi vemu Zimbabwe vari mu South Africa, nezvimwe zviri kusangana nevashandi ava.
Vanoti dai nyaya dzezvematongerwe enyika mu Zimbabwe dzagadziriswa, nekuti zvematongerwo enyika, zviri kukonzerawo kusagadzirisika kwedzimwe nyaya dzakawanda.
Muzvare Norah Tapiwa vanoona nezvemabasa mu Global Zimbabwe Forum vari mu South Africa.
Muzvare Tapiwa vanoti chinhu chakanaka kuti hurumende yaenda kunoona nemaziso ayo mamiriro akaita zvinhu mudunhu rakaitika mhirizhonga.
Hurukuro naMuzvare Norah Tapiwa